Gịnị bụ a musette akpa ke ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Akpa igwe akpa ume - olee otu anyi si edozi
Gịnị bụ a musette akpa ke ịgba ígwè?
Na-na-igwe kwụ otu ebeoriri na-edozi ahụ na Tour de France
N'ozuzu, aegwuewere na o pere mpeakpaejiri maka ibu nri ma ọ bụ ihe onwe onye mgbe ị na-aga njem, njem,ịgba ígwèwdg N'ụwa nke ọkachamaraigwe kwụ otu ebeọduọ, nke aakpanwere nri na mmiri ma nye yandị na-agba ígwèna mpaghara nri n'oge agbụrụ.
(egwu Intro dị egwu) - Anọ m na ogbo 15 na Giro d'Italia na m ga-egosi gị ihe na-eme na musette tour ụwa. (egwu dị egwu) Anyị nwere mgbịrịgba abụọ, karama abụọ, bidon mmiri, otu bidon mmiri, anyị nwere mmiri nkịtị, ọ energyụ energyụ ike, ihe ọ carbohydụ carbohydụ carbohydrate, gels atọ. Ya mere, anyị nwere gel, gel-flavored cola, ọtụtụ gelsin ebe a, gel ọzọ ebe a, gel ike, gel SIS ndị a.
Na ogwe osisi, ogwe banana, mmanya ọzọ, anyị nwere Energy Coco-Crisp-Bar. Nwere Coca-Cola maka ndị ọkwọ ụgbọala, obere Coke, ọ bụ ọmarịcha obere Coke, obere Coca-Cola. Anyị nwere achịcha osikapa, achịcha osikapa obi, achịcha osikapa, achịcha osikapa jupụtara n’ụbọchị, (jazz music) - nke na-ewelite atụmanya m.
Anyị jere ije na mpaghara nri ahụ wee gaa UAE Team Emirates, ebe anyị nwere Massi na Team Doctor Jarrad, ndị ga-agwa anyị gbasara ihe dị na egwu? Odi nma, ichoro igwa anyi gbasara ya, enyi? - O doro anya, m na-ekwu, ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ, mana ihe mgbaru ọsọ doro anya iji nye ụmụ okorobịa ahụ ume ma mee ka ha mejupụta maka akụkụ ọzọ nke usoro ahụ. Ya mere, onye ọ bụla na-enweta bidons abụọ ma ọ bụ karama abụọ ma ha abụọ nwere njikọ ọsọ ọsọ nkịtị, nke kachasị bụrụ ngwakọta carbohydrate. Mgbe ahụ ha ga-enweta ụfọdụ gels, aha ya bụ onye na-akwado anyị, yabụ ha nwetara gels dị iche iche na ogwe ike abụọ dị iche iche, nke ahụ bụ ọtụtụ calorie maka ha, ha ga-etinyekwa ndị ahụ n'akpa ha ma nwee nri, ha nwekwara ndị ahụ Nhọrọ nke achịcha osikapa a na-eme n'ụlọ nke ndị ọbịa na-akwadebe maka gị kwa ụbọchị, e nwere ụfọdụ n'ime ha, atọ n'ime ha ma nke ahụ dị mma, yabụ na ị nwere nhọrọ nri nri na ị nwere ike ịhọrọ ihe ịchọrọ. - Ihe ị tinyere n’ime musette na-agbanwe dị iche iche? Dịka ọmụmaatụ elu ugwu ma ọ bụ ọkwa dị larịị ma ọ bụ ọbụna ogologo na mkpụmkpụ? - Ee, mba, yabụ na anyị mere obere obere ihe dị iche iche dabere na ọkwa ahụ, ị ​​maara? Ọ bụrụ na ọ bụ ọkwa dị mfe karị, ụfọdụ ụmụ okorobịa nwere ike ịsị oh, naanị ihe ha chọrọ bụ otu mmiri kama ịgwakọta abụọ ma ị gaghị eri ọtụtụ gels.
Ha nwere ike nwekwuo, ụfọdụ ụdị achicha osikapa, karịa gels. Nke a bụ oge ebe, ị maara, oge ụfọdụ siri ike na njedebe ọtụtụ ụmụ okorobịa na-enweta ike ngwa ngwa n'ụdị gel, gel ma ọ bụ abụọ maka oge ọzọ - na ọtụtụ ndị ọzọ na-etinye coke na Hariboor, ahuru m na igaghi, enwere ihe kpatara nke a? - Echere m na, echiche ahụ nwere ezigbo carbohydrates ngwa ngwa ma ọ bụ hapụ ike ọsọ ọsọ, mana m na-ekwu, enweghi nnukwu ọdịiche na etu osikapa si abanye n'ọbara gbanwere glucose karịa Haribos, Haribo nwere ike ịbụ obere ọsọ ọsọ mana echeghị m na nke a ga - abụ njedebe nke ụwa Ihe dị iche n’etiti mmeri ma ọ bụ ịlafu agbụrụ, yabụ mba, anyị anaghị eji swiiti Hariboor ugbu a. - Mpaghara nri bụkwa ebe dị mma maka ụfọdụ ndị Fans n'ihi na ọ bụghị naanị na ị nwere ọfụma maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ị nwere ike soro ndị niile soigneurs pụọ, mana ị nwere ike, ma eleghị anya, karama ma ọ bụ abụọ ga-agbadata na mpaghara nri. achọpụtara m na ụmụ okorobịa a, ụmụ nwoke si EF, bụ ndị guzobere obere obere ụlọ nri ebe a maka ndị na-akwado ha.
Ya mere, nke ahụ bụ akụkụ nke mmemme ile ọbịa ha. Ha nwere champeenu, biya, ha nwere Moretti, m na-ekwu, echere m na nke a abụghị maka ndị ọkwọ ụgbọ ala, ụmụ okorobịa.- Mba, ọ bụ ezie na mgbe m nọ na Rome.- ysmụ okorobịa, enwere m ike ịnweta biya? - N'ezie.- EF. (Ihe ọ cụ cụ na-egbu egbu) - Cheers, Cheers.
You nwere ụzọ ụfọdụ ị ga-esi jide egwu gị n'ihi na amaara m na ọtụtụ mmadụ dị iche- Ọfọn, ụzọ kachasị mma, dịka ụlọ ahụ taa, ị na-enye ya n'ụzọ ahụ, mgbe ahụ ọ nwere ike ịnya ụgbọ ala jidere ha ebe a ma ọ nwere ha n'aka, ma odi mma. Nke ahụ bụ ihe kachasị mma maka m taa, enwere m olileanya. Nke ahụ bụ otu ị si eme ya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijide musette ebe ahụ, ọ bụ otu ị ga - esi mee ya n'aka ndị ọkachamara. (Onye na-agba ajụjụ ọnụ na-achị ọchị) - Ọ bụ njedebe nke isiokwu a, ọ bụrụ na ị masịrị ya, nye ya nnukwu mkpịsị aka ukwu na maka ihe ndị ọzọ giro pịa ebe ahụ ma echefukwala ijide t-shirts ndị ahụ na nkọwa iji nweta n'okpuru.
Kedu ihe bụ akpa akpa akpa?
Omenalaakpa musetteburu nri na replenishment nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ogologo agbụrụ.Musetbụ ndị rụrụ nanịakpa naoghere na-emeghe na ogologo aka nke na-eme ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè kegide ha n'ofe ma jiri otu aka nweta ọdịnaya. Ozugbo ha tọgbọ chakoo, ndị na-agba ịnyịnya ahụ na-atụ yamusetịn'akụkụ ụzọ.
Ndi be anyi, nke a bu mmeghari edemede m gara aga na isi okwu a, a, m chikotara ihe omuma ndi ozo, ehee, mu na gi anakpo, na a na m eme nke a maka Marine Corps na otu esi edobe websets na crapso uh maka ndị nzuzu ndị na-ajụ m ebee ka isiokwu ahụ dị na gịnị kpatara eburu ya ma ọ bụ naanị n'ozuzu ebee ka ọ gafere mgbe ị dị nzuzu, mgbe ị dị nzuzu ịhụ na m wedara ya ma ị meghị lee ya na edemede m hu ya putara na ehichapu ya, biko ajula m otu nari ugboro ebe edemede a dikwa mma, ka anyi banye n’ime ngwungwu ugbu a, okay so we have the basic content, um, m mere ya Na mkpokọta, ihe ha gaara eburu ha agha dum na Bastogner.Ma ha bidoro dobe ha karịa ma na-agagharị, jiri setịpụrụ, webụsaịtị, yabụ, ee, isi, ana m ewepụ gị tripod ugbu a, nke ọma na Ihe bụ isi, ọdịnaya niile a bụ naanị obere ihe, yabụ o doro anya na anyị nwere akpa anyị ga-agafe akpa ahụ. s na ndị dị otú ahụ, mana ka anyị gafere mkpọ ahụ n'ụzọ dị mfe karịa ka anyị nwee ụdị obere ihe niile dịka ọkụ, nke ahụ bụ Kachasị mma - ihe ha ga-eyi, yabụ ọbụlagodi nke a, ma ị maara obere ihe Di na nwunye nwere ike kpo oku ma o buru na ese siga na ihe ndi ozo ndi ozo, ihe ndi ozo gi na edozi gi ma oburu na i nwere ha agha i choro uzo abuo, ya mere enwere abuo, sọks abụọ ka na-agbanye elu, nke a abaghi ​​uru sọks, mana abuo abuo ihe umu unu na apughi ibanye na akwa nhicha ma ha bu 101/2 ma obu ha yi poncho O wutere m, obughi ya poncho, enwere mmiri ozuzo nke m 'nwee akwa mmiri ozuzo ka m wee jiri ubu ma oburu na ichoro ihu otu esi apia nke a, gaa m otu m ga-esi tinye akwukwo anyi anyi ka anyi ghota gi, ya mere, ihe nile na-abanye n'ime obere akpa a ebe a ka gi pụrụ ịhụ na anyị nwere abụọ slotted uko akpa n'elu nke na-agbago Ruo na ala nke azu paaki, um, dika odi nfe ka m n’eme ya, etinyere m sọks na ihe m, ewela iwe, ana m etinye ha n’ime, ana m etinye sọks na okpu agha m ebe ahụ n’akụkụ a enwere m ihe nzuzu niile m na-etinye afụcha afụ ọnụ. condom dị ka ngwa ọrụ na arịa m na-esi nri n'akụkụ a, m wee wepụ akwa nhicha m azụ ebe a dị ka mpempe azụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya na ọ bụghị ya ma m tinye ịnyịnya ịnyịnya m n'elu wee banye nnukwu isi ahụ ebe a Nke ahụ meghere nke ukwuu site n'akụkụ, etinye m aka m ebe ahụ ka ọ dị ihe dị ka site na nkwụ aka ruo na nke ọzọ nke nkwụ gị, mgbe oge ruru, ma lee, anyị nwere ọtụtụ ebe m ga-aga debe okara iri ka m gha apia na m tinyere ihe nile ma aga m egosi gi ihe o yiri, ezigbo ndi be anyi, ya mere ugbua ka anyi leba anya n'ime akpa azu mgbe achikota ihe nile n'ihi na unu nwere ike hụ na ọ naghị eburu ọtụtụ ohere, ọ bụ ihe dị ukwuu otu Um ị ga - esi hụ ọkara nke mytes dị ebe ahụ na ọdịnaya niile dị na akpa ọ bụla yana stuf f um? Banyere akpa azụ ahụ, uwe ọ bụla ọzọ, ma eleghị anya uwe elu ma ọ bụ uwe elu ma ọ bụ akwa uwe, ga-abụrịrị ihe dị mma ka ị nwee ike tụfuo a na azụ maka nkwado azụ ma ọ bụ ọbụlagodi uwe, mgbe ahụ ị ' Aga m anụ ụfọdụ ụmụ okorobịa ha na-edebe kompas ma ọ bụ na ha esighị, gbamgbam, ana m ele kompas ọ bụla m jikwa compass na eriri maka akpa musette Somefọdụ ụmụ okorobịa ga-ebu mgboagha um ọzọ ihe ị nwere ike ịgwa na onweghị osisi ebe a. , ha agaghi eyi ihe omuma ebe a, enweghi kwa ebe, eziokwu ahu bu, um, enweghi nsogbu na ha adighi abanye na musk na d-day, nke ahu kpatara na enweghi kichin ubi obula dika odi na ndị agha, yabụ na ha enweghị ezigbo mkpa maka akwa maka ịmara na ha na-enye K-rations, ka enwere ihe ahụ na mgbe ahụ eziokwu ahụ bụ na nke a n'ozuzu ya na-emetụta ụbọchị ụbọchị na naanị ihe m ga-eme kwuo ọ bụrụ na m gbagara n'ubi ahịa ahịa nwere ike ịbụ otu esi eme ra. anya mmiri si incoat na ruo dị ka rations ma ọ bụ mgbọ mgboagha ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ na na na na-arapara n'ihe ọzọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ị na-mgbe niile na-eriri gị nnọọ nso n'ọnụ ọnụ fọrọ nke nta ọbụna ka mma karịa nke a, ebe ọ fọrọ nke nta na-emetụ akwa nke mkpuchi ahụ , so again um i hope na enyere m aka bye bye
Gịnị bụ a Tour de France musette akpa?
Ma generically, obereakpa(a na-akpọkarị “musetị”Nke ndị France na“ bonkakpa”Nke ndị Briten) nwere nri na mmiri dị n’ụdị mmanya ọkụ ma ọ bụ abụọ, di na nwunye na ngwugwu gel na karama egwuregwu ọ drinkụ .ụ. Ná mmalite nke ogologo ọsọ ma ọ bụ na ihu igwe dị jụụ, ndị na-agba ịnyịnya na-eri obere sandwiche a na-akpọ panini.
Ọ nwere ihe mgbochi?
.B.ekpugbuma ọ bụ obere mkpọ bụ akpa nwere otu ubu eriri. Ọ bụ ezie na o yiri nke akpa, otu eriri ubu na-eme ka ụdị a dị iche na akpa ndị ọzọ. Enwere ikike na usoro iwu a.
N’oge ụfọdụ, m na-ahụ ndị mmadụ na-ajụ ihe ka mma, ihe ka njọ ugbu a, ha abụọ dị mma. Agaghị m anwa imetụta gị otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ n'isiokwu a, ihe m ga-eme bụ na m ga-anwa ịnye gị ozi ahụ niile ka ị nwee ike ịme mkpebi n'onwe gị n'onwe m enwere m ụdị abụọ akpa na gburugburu dị iche iche ejirila m akpa azụ ma ọ bụ akpa yiri ya na oke ọhịa n'ime ọhịa M ji ha na ndụ m kwa ụbọchị n'ọhịa ma ejirila m akpa azụ ọzọ na ndụ m kwa ụbọchị ma ejiri m ha abụọ na nyocha sayensị ugbu a Achọtala m ọtụtụ uru na ọghọm maka ha abụọ, yabụ ka anyị bido na akpa azu ma na nke a, m na-egosi ma ọ bụ gosipụta nke a na obere akpa lumberjack zoro ezo yabụ ugbu a kedụ ụfọdụ uru na ọghọm nke a haversack otu n'ime Uru bụ na ihe niile dị gị iru akpa bụ mgbe niile na ubu gị na ị nwere ike dị nnọọ aga ch iru n'akụkụ gị na jidere ihe ọ bụla ị chọrọ iji nweta na otu ihe na-aga n'ihi na m stow ihe ị nwere ike mfe bulie ya ma tinye ọ laghachiri na enwere ụfọdụ ọghọm ya n'ihi na akpa bụ mgbe niile na ọ na ọ slides mgbe niile na-apụta na-eme m ọtụtụ ugboro na akpa bụ na ụfọdụ ebe mgbe ị hulata, akpa ileghara n'ihu na-esogbu ihe ị na-eme m nwekwara ohere na ihe si n'akpa m daa ụfọdụ n'ime ihe ndị masịrị m banyere ya bụ na enweghị onye nwere eriri mgbe ị na-etinye ya n'ubu gị nke nwere ntakịrị mmetụta mana n'ozuzu ya na hammersack ị gaghị edebe obere obere ka o kwere omume maka onye maara gị Achọghị ka ịdị arọ ya nke ukwuu n'ihi na nke a gafere otu ubu, a na-ekesa ibu ahụ n'ahụ gị mana ọ na-eduzi ya.
Ike na-aga ebe ịchọrọ ile anya n'ihi na mgbe niile, ọ bụrụ na ọ bụ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị, ị nwere ike belata ọbara na-agba gị na ogwe aka ma enwere m ya oge ole na ole, oge ụfọdụ na nsogbu a. , eziokwu na-abịa na Mgbe ụfọdụ ị gaghị enwe ike iji ọtụtụ buru ihe mgbe niile, yabụ, akpa azụ na-abụkarị uru maka akpa azụ, m ga-egosi ya na akpa m na mpaghara si llbeannow, ọ bụ ya mere akpa a na-eji otu ebe nwere ike ịbịaru nso ọ bụla nke, na a yiri olu, na bụ m azu paaki, ka a ibu otu dị ka a hiking azu paaki. Nke a bụ ezigbo mma-sized akpa m na-eji. m na-akasị eji azu paaki mgbe m na-ese ihe na ọtụtụ akụrụngwa dị ka taa, tinyere ezigbo ego akụrụngwa, igwe okwu, igwefoto igwefoto na mkpa ka m wepụ akpa m n'ihi na ọ ka sie ike n. N'elu nke ahụ, ụfọdụ uru ya bụ ọla aka ndị a ị nwere ugbu a na d en ọla mgbaaka. Kesaa ibu ahụ n'ubu gị ma jiri obi gị na nkwado obi ma ha nwere b nweta nkwado ma ọ bụrụ na nke ahụ nwere eriri anyị, nke na-ekesakwa oke ibu n'ihu gị, yabụ ọ dị mma karịa, ọ bụ n'ihi nkesa a nke ọma iji buru ibu dị arọ, ebe akpa ị na-agbakwunye na-etinye nsogbu n'ubu gị ma ị ga-enwe gbanwee ha site na ubu rue ubu oge ụfọdụ nwere nsogbu, ị gaghị enweta ihe na-aga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịnweghị onye gị na ya ga-ewepụ gia n'ime akpa gị have ga-ewepụ akpa gị, mepee ihe ịchọrọ, were ya ma ọ bụrụ na ọ bụ maka iji ngwa ngwa, jiri ya, tinyeghachi ya n'ime akpa ahụ ma buru akpa ahụ n'ubu gị, mana kwuo na ịchọrọ inweta mmiri ma ị dị ka m ma ị naghị eburu akpa mmiri na akpa gị anaghị m enwe oge niile enwere m n'oge gara aga mana anaghị m enwekarị hydration n'akpa m na nke ahụ pụtara na mgbe ọ bụla m chọrọ mmiri zụrụ, m ga-ewepụ akpa m, tinye ya n'akpa m, wepụ bọlụ osimiri m, weta ezigbo ihe ọ drinkụ drinkụ ma debe ya ọzọ, uru ọzọ nke havi ng Ogo nke Ebube rucksack na rucksack dị iche, ugbu a wee chọọ ịmaba n'ọhịa mgbe rucksack ndị na-eme njem dị mma maka nke a, mana ha nwere nsogbu ebumpụta ụwa, ọ dịịrị ha mfe inwe ahụ iru ala n'ihi eriri na n'ihi ya ọ bụ ya mere m ga - esi na - aga ije n'oké ọhịa na obere akpa obere mma karịa na akpa, mgbe anyị na-abanye n'oké ọhịa na-enweghị akụrụngwa igwefoto ma na-arịgo n'ụzọ dị ntakịrị, enwere m ike iweta akpa hama, ọ bụ ezie na amaara m na akpa ahụ na-eche ihu na azụ m, na-enye m ohere ịga njem dị nnọọ anya, naanị otu echiche ikpeazụ na mgbe ị na-enweghị ike ikpebi n'etiti egwuregwu nke ị chọrọ ị nwere ike ịme oge kachasị mma nke ụwa abụọ m na-eme ya mgbe mgbe, ebe azu paaki na akpa azu n’otu oge kwe ka azu paaki buru otutu ibu, ebe azu paaki n’ezie na enye unu nnweta ohere ugbua amaghi m nke unu nke ahu bucha akwukwo m ihope ihe omuma a bara uru ma ya buru na inwere ajuju obula ka ikwu.
Ọ bụrụ na isiokwu m masịrị gị biko pịa bọtịnụ 'Dị ka' nke na-agwa m na ụdị isiokwu a masịrị gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe niile ịhụ ihe m na-eme, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe m na-eme ma biko pịa bọtịnụ ntinye aha m bụ nate Abụ m onye ode akwukwo Outdoorsman na nke a bụ ntakịrị ozi gbasara esemokwu dị n'etiti akpa na paaki na ị nwere ọmarịcha ụbọchị
Kedu ihe dị na akpa nri ịgba ịnyịnya?
.B.akpa nri akpa, nke a na-akpọkwa, 'a musette', bụ obereakpaeji eriri ubu eji eme iheịgba ígwèagbụrụ. Onyeakpanwerenrima drinkụọ mmanya n'ụdị ogwe ike, gels ike na ihe ọ energyụ energyụ ike. Mgbe ụfọdụ, ndị na-agba ịnyịnya na-anata obere cupcake na musettes.
Kedu ihe dị iche na etiti na arsack?
Dị ka nouns naọdịiche dị n'etiti haversacknaazu paaki
ọ bụekpugbubụ obere akpa siri ike a na-ebu n'azụ ma ọ bụ n'ubu, na-ejikarị naanị otu eriri nke ejiri kanvas mee mgbeazu paakibụ akpa ebu n'azụ ma ọ bụ ubu, ejiri eriri jide ya.
Kedu ihe dị iche na akpa na akpa azụ?
Kedu ihe dị iche nakaazu paakina aazu paaki? Nanị tinye apaaki bụotu akpa enwere ike iji eriri eriri na azụ azụ. Aazu paaki, enwere ike iburu ya na ndi azu mabunke a na-emekarị site na kwaaji nabuejin'imeagha ma ọ bụ maka ntụrụndụ n'èzí.Jenụwarị 3 2017 Nọvemba
Gịnị mere ha ji akpọ ya knapsack?
.B.knapsack bụa akpa na eriri abụọ ị na-eyi n’ubu gị, na-ahapụ ogwe aka gị. O sitere na German knappen, 'ka aru,' ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na aha ahụ sitere n'eziokwu na ndị agha bu nri na haknapsacks.
Nwere ike iji akpa azụ kwesịrị ekwesị?
Ọ bụlaazu paakigamee. Ke adianade do, ihe maka ankịtị azu paakiagaghị abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwado nke ibu ọzọ.Anyịkwadoro GORUCK Rucker dị ka ihe zuru okena-emebimkpọ
Bụ a akpa aka na otu ihe ahụ dị ka azu paaki?
.B.kootubụ nke pekarịrịazu paaki, ma ndị mmadụ na-eji okwu a eme ihe kachasị na Canada iji zoo aka na ihe ndị America na-akpọazu paakima ọ bụ obere akpa. Ihe dị iche iche dị na nha nke ihe a.Dec. 8 2020
Ebee ka ị na-etinye musette na igwe kwụ otu ebe?
A na-ejide akpa ahụ n'ụzọ dị mfe, ma debe ya nwa oge n'ubu ya ebe ihe ndị dị na ya (nri na karama mmiri) na-etinye n'ime akpa uwe ndị na-agba ịnyịnya na oghere karama. Rangedị akpa akpa anyị nwere ụdị dị iche iche sitere na Apis na Vermarc.
ya gbawara agba
Kedụ ụdị akpa ejiri mere musette?
Emere akpa akwa a dị mfe ka ọ fechaa, dị ọnụ ala iji rụpụta & nkwupụta ụda; ebipụta ya na ndị na-akwado ha logos. Maka ebumnuche a, ọdịm ọdịnala ọdịnala bụ ezigbo azịza. Otú ọ dị dị ka akpa maka iji ụbọchị kwa ụbọchị, musette dị umeala n'obi adịghị adaba maka nzube.
Egwu velopac ahụ ọ dabara maka iji ya kwa ụbọchị?
Maka ebumnuche a, ọdịm ọdịnala ọdịnala bụ ezigbo azịza. Otú ọ dị dị ka akpa maka iji ụbọchị kwa ụbọchị, musette dị umeala n'obi adịghị adaba maka nzube. VeloPac azụlitewo ọgbara ọhụrụ nke musette kpochapụwo nke zuru oke maka njem kwa ụbọchị mgbe ihe na-adịgide adịgide & nkwupụta ụda; achọrọ akpa dị mfe.